Al-shabaab oo soo bandhigtay Khasaaraha Weerarkii Ceel Saliini – Puntland Post
Posted on February 22, 2020 February 22, 2020 by CCC
Malayshiyaadka Al-shabaab, ayaa si rasmiya u soo bandhigay, sawiro muujinaya Khasaarihii ay gaarsiiyeen ciidamada Militariga dowladda Soomaaliya, kadib weerarkii Al-shabaab ka fulisay Saldhiga degaanka Ceel Saliini ee gobolka Shabeellada Hoose.
Sawirada Al-shabaab soo bandhigtay, ayaa muujinaya malayshiyaadkooda oo si buuxda gacanta ugu haya Saldhiga Ceel Saliini iyo maydad aad u badan oo daadsan gudaha xeradaas, kuwaas oo Al-shabaab ay ku sheegtay askartii ciidamada Militariga dowladda Federaalka Soomaaliya.
Sidoo kale, sawirada waxaa ka muuqda malayshiyaadkooda oo gubaya qeyba kamid ah Saldhiga iyo qaar kale oo saran gaadiidkii dagaalka ee xeradaasi yaallay.
Al-shabaab ayaa saldhiga Ceel Saliini weerartay 19-kii bishaan February oo ku beegnayd Arbacadii todobaadkii hore. Saldhigaas oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose ayaa qiyaastii 55 KM u jra magaalada Muqdisho.
Hoos ka eeg sawirada qaar